हाम्रो शहर राम्रो शहरको सोच कहिले ? बिहीबार, असार २, २०७९
किताबमा खेल कहिले सम्म ? खोइ आवाज उठेको ? आइतबार, जेठ २२, २०७९
अहिले निर्वाचनामा प्रतिस्पर्धा के को ? शनिबार, वैशाख १७, २०७९
महिला हिंसा रोक्न जनचेतनासंगै कानुन कार्वाहीमा जोड दिन की ? सोमबार, चैत २१, २०७८
नारी दिवसको नारा व्यवहारमा कहिले लागु हुने ? सोमबार, फागुन २३, २०७८
मोटरसाईकल चालकलाई जरिवान मात्र, खोई त सचेतना ? बिहीबार, फागुन १९, २०७८
विकास निर्माणकालागि खोइ त नागरिकको खबरदारी ? अहिले पनि तिलावेको जाम उस्तै छ । तिलावेमा बनाइको डाईभर्सन भत्किसकेको छ । त्यतीमात्र होइन आमजनताको सहजताको लागि निर्माण भइरहेको सडकमा गरिने लापर्वाहीका कारण आमजनताले ज्यान समेत गुमाउनु पर्दा सरोकारवालाको ध्यान जादैन । सोमबार, माघ २४, २०७८
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचको विवाद के का लागि ? आइतबार, माघ २, २०७८
महामारीलाई विर्सिने हो की, त्यसबाट पाठ सिक्ने ? हो जिवन चलाउनका लागि काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बजार चलाउन आवश्यक । पार्टी चलाउनका लागि राजनितिक कार्यक्रम पनि गर्न जरुरी छ तर शर्तकता अपनाएर पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ । आइतबार, पुस २५, २०७८
वीरगंज महानगरले त शिक्षक सरुवा ग¥यो, अरुले कहिले गर्ने ? महानगरले भने अनुसारको निस्वार्थ भावले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक सरुवा गरिएको नभएर आर्थिक चलखेल पनि शिक्षा महाशाखा तर्फ भएको खुले त्यसले भोली महानगर नै बदनामको शिकार नहोला भन्न सकिन्न । यता तर्फ अहिले सम्पादन भएको कार्यले आगामी झलक देखाउने छ । बिहीबार, पुस ८, २०७८
शिक्षा क्षेत्र सुधारमा हाम्रो प्रयास खोइ ? शैक्षिक संस्था बन्द हुदाँ भएको क्षतिलाई कसरी पुर्ति गर्ने, विद्यार्थीको भविष्य कसरी बनाउनेमा खासै बहस भएन । शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा हाम्रो प्रयास खोइ ? आइतबार, असोज १७, २०७८
सरसफाइमा आम नागरिकको भूमिका खोइ ? बुधबार, भदौ २३, २०७८
जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड कहिले सम्म ? शहर बजारमा मात्र सिमित रहेका गुणस्तर अनुगमन गाउँसम्म पुगोस् । दिनहुँ उपभोतmा ठगिरहँदा पनि चुप लागेर बसेको उपभोतmा समितिहरुको ध्यान यस्ता फोहोरी पसल तिर पनि जान जरुरी छ । मंगलबार, साउन १९, २०७८
सडकको दुरुपयोग कहिले सम्म ? सडक संरक्षणमा स्थानीयको ध्यान खोई ! जनतालाई हिलो र धुलो नखुवाई सडक निर्माण नै हुदैन । यति कष्ट सहेर निर्माण भएका सडक दुरुपयोग गर्न हामी पछाडी पर्दैनौ आखिर किन होला ? शुक्रबार, साउन ८, २०७८
वैदेशिक रोजगारीमा कहिले सम्म ठगिने ? एजेन्ट मालामाल युवाहरुको बेहाल आखिर कहिले सम्म ? बुधबार, वैशाख २२, २०७८
चिसो मौषममा चिसिएको स्थानीय सरकारको खोई त योजना ? अहिलेको समयमा पुरै प्रदेश २ नै प्रभावित छ तर न त प्रदेश सरकारबाट न त स्थानीय सरकार यसकोबारेमा कदमा चालेको देखिन्छ । यसको बारेमा केही तयारी नै नरहेको बुझिन्छ । सोमबार, माघ १२, २०७७
महामारी र चाडपर्वमा पनि कालोबजारी, नागरिक समाजको भूमिका खोइ ? कोरोना भाइरसले विगत ९ महिनादेखि विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ । अहिले पनि विश्वका अधिकांश मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्न विश्व नै ६ महिना भन्दा बढी लकडाउनमा रहनु परेको थियो । मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७
आखिर किन समयमै हुन्न् सडक मर्मत ? जिम्मेवार निकाय कहिले बन्ने जवाफदेहि प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि नेशनल ट्रेडिङ्ग देखी ब्रहमचोक सम्मको सडक, वीरगंजको घण्टाघर चोक देखि मुर्ली चोक हुँदै पावर हाउस चोक पुग्ने पिच सडक पुनः जीर्ण बनेको छ । बिहीबार, साउन १, २०७७